Wasiirka Warfaafinta oo Furay Shir Lagu Dhammaystirayey Siyaasadda Warbaahinta Qaranka – WARSOOR
HARGEYSA – (WARSOOR) – Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland Md. Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa maanta Huteelka White Horse ee magaalada Hargeysa ka furay Kulan ku saabsan dhammaystirka Siyaasadda Warbaahinta Qaranka oo muddo soo socotay diyaarinteedu.
Sida uu ku soo warramay Weriye ka tirsan Wakaaladda Wararka ee SOLNA, waxa kaloo shirkaasi ka qaybgalay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta, Md. Maxamed Yuusuf Ismaaciil, Agaasimewaaxeedyada Wasaaradda, Masuuliyiin ka socday Ururrada Saxaafadda, Dallada SONSAF iyo khuburro kala duwan.
Wasiirka WasaaraddaWarfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland Md. Saleebaan Yuusuf Cali Koore, ayaa sheegay in Siyaasadda Warbaahinta Qaranku ay lagama maarmaan u tahay Warbaahinta dalka oo uu xusay inay muddo dheer ugu soo shaqeynayeen xili aanu ku dhaqanka sharciguba ka tisqaadin dalka.
Wasiirka Warfaafintu wuxuu intaas ku daray in Xukuumadda Somaliland ay ka go’an tahay xushmaynta madax-bannaanida Saxaafadda,haseyeeshee Warbaahinta looga baahan yahay Waddaniyad iyo ilaalinta sharciga. Waxaanu tilmaamay inay Wasaarad ahaan la shaqeynayaan qaybaha kala duwan ee Warbaahinta.
Shirkaasi waxa markii dambe soo gabogabeeyey Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Yuusuf Ismaaciil oo u mahadceliyey waxgaradkii iyo daneeyeyaasha Warbaahinta ee Siyaasadda Warbaahinta Qaranka wax ku darsaday, waxaanu xaqiijiyay inay ku soo darayaan Siyaasadda Warbaahinta tallooyinkii shirka maanta laga soo jeediyey. Waxa kaloo uu xaqiijiyey inay mustaqbalka sameyn doonaan siyaasaddii lagu dhaqi lahaa dhaqanka iyo wacyigelinta.
Xukuumadda Somaliland oo Soo Saartay Go’aan Ku Saabsan Xakameynta Covid-19